Aluminom Ngwakọta Ogwe Mgbakọ | Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya
Ejiri ogwe osisi aluminom dị elu na -enwu enwu site na usoro nke ibuli gloss nke elu ihe mejupụtara aluminom mejupụtara. Ọdịdị dị elu pụtara ihe mkpuchi nke mkpuchi panel. N'ozuzu, ogwe ahụ ga -apụta nke ọma mgbe gloss dị n'agbata ogo 85 na 95. Ogwe osisi mejupụtara aluminom dị elu na -enwu dị elu karịa nke panel acp nkịtị, nke na -ewetara ndị mmadụ mmetụta na -enwu enwu.
Nchapụta nke peellescent aluminum composell panell na -enweta site n'ụdị na -adịghị ahụkebe a na -agwakọta ya. Aha ya bụ maka agba ya na -agbanwe agbanwe. N'elu ngwaahịa a nwere ike iweta ọmarịcha ihe dị iche iche mara mma na pearlescent na ngbanwe nke isi ọkụ na ihu elele.
Ogwe ihe mejupụtara aluminom nke agbakwunyere nwere akụkụ abụọ brush aluminum panel di na nwunye ka polyethylene ihe dị n'ime ya.
Tọ Ogwe ihe mejupụtara ọkụ na-eguzogide aluminom na-anabata ihe ọhụrụ mepere emepe nke polymer ihe onwunwe, yabụ nkwalite ọkụ ya emeela elu, ọ nwere ike rute ọkọlọtọ A-klas ma mezuo ihe ọkụ na-achọ na ụkpụrụ ụlọ. N'otu oge ahụ, ọ mebikwara oghere nke ogwe ihe mejupụtara aluminom ọdịnala.
Ogwe ihe mejupụtara Aluminom na-enweghị ọkụ bụ ihe nchekwa ọkụ maka mma ụlọ.
Igwe ihe mejupụtara Aluminom mejupụtara akụkụ atọ nke jikọtara ya na mkpuchi nke nnukwu nrụgide dị ka agba na -ejikọ iji mepụta kọlụm dị larịị nke na -anọchite anya nka yana ọdịdị ịhụnanya nke ọdịnala.